Gatham (2020) | MM Movie Store
အိန်ဒိယရုပျရှငျကွိုကျသူတှအေတှကျဇာတျကှကျအလှညျ့အပွောငျးကောငျးကောငျးနဲ့Thriller ဆနျဆနျရုပျရှငျတဈကားညှနျးပေးခငျြပါတယျဇာတျလမျးက ရဈရှီဆိုတဲ့မငျးသား အတိတျမနေ့ရောကနေ ပွနျသတိရလာတာက စပါတယျ
သူ နိူးလာတဲ့အခြိနျ သူ့ဘေးနားမှာဆရာဝနျတဈယောကျနဲ့သူ့ခဈြသူအာဒီသီ တို့သာရှိပါတယျသူကလညျး မိဘတှကေအစ ဘာမှမမှတျမိတော့တာဆိုတော့ သူ့မိဘတှအေကွောငျးအာဒီသီကို မေးကွညျ့လိုကျတယျအာဒီသီက နငျ့အမကေတော့ ဆုံးသှားပွီ အဖတေော့ ရှိသေးတယျဆိုတာနဲ့သူ့အဖကေိုတှခေ့ငျြတယျဆိုပွီး အာဒီသီကို လိုကျပို့ခိုငျးပါတယျ
သူတို့သှားနရေငျး သူ့အဖအေိမျရောကျဖို့ မိုငျ ၃၀၀လောကျမောငျးရဦးမယျ့နရောမှာ ကားပကျြသှားပါတယျအဲ့ဒီအခြိနျ အာဂြှနျဆိုတဲ့ အသကျခပျကွီးကွီး လူတဈယောကျရောကျလာပွီး အခြိနျကလညျး မရှိတော့ဘူးသှားရမှာလညျး ဝေးသေးတယျဆိုတော့ သူ့အိမျမှာလိုကျတညျးဖို့ ချေါရာကနေ စိတျလှုပျရှားစရာတှေ စပါတော့တယျ
အာဂြှနျက အစပိုငျးမှာ အိမျရှငျကောငျးပီသသလိုနဲ့ သူ့သားရောကျလာတဲ့အခြိနျမှာတော့ တဈမြိုးဖွဈသှားပါတယျသူ့သားဖွဈသူက ရဈရှီရဲ့ ခဈြသူအာဒီသီကို မုဒိနျးကငျြ့ဖို့ကွိုးစားသလိုသူကလညျး အိမျထဲကပွနျထှကျခှငျ့မပေးတော့ဘဲ နှိပျစကျပါတော့တယျအဲ့ဒီအခြိနျမှာပဲ ဇာတျလမျးက မထငျမှတျထားတဲ့အခွအေနကေို ပွောငျးလဲသှားတာပါ
အာဂြှနျတို့သားအဖက ရဈရှီကို ဘာကွောငျ့ဒီလိုလုပျရတာလဲ?????ရဈရှီမမှတျမိတော့တဲ့ သူ့ရဲ့အတိတျမှာ ဒီလူတှနေဲ့ ဘယျလိုအရှုပျအရှငျးတှမြေားရှိခဲ့လို့လဲ?????ဒါမှမဟုတျ စိတ်တဇလူသတျသမားတှပေဲလားဆိုတာကို ရုပျရှငျထဲမှာ ဆကျလကျရှုစားပေးကွပါ
အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကြိုက်သူတွေအတွက်ဇာတ်ကွက်အလှည့်အပြောင်းကောင်းကောင်းနဲ့Thriller ဆန်ဆန်ရုပ်ရှင်တစ်ကားညွှန်းပေးချင်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းက ရစ်ရှီဆိုတဲ့မင်းသား အတိတ်မေ့နေရာကနေ ပြန်သတိရလာတာက စပါတယ်
သူ နိူးလာတဲ့အချိန် သူ့ဘေးနားမှာဆရာဝန်တစ်ယောက်နဲ့သူ့ချစ်သူအာဒီသီ တို့သာရှိပါတယ်သူကလည်း မိဘတွေကအစ ဘာမှမမှတ်မိတော့တာဆိုတော့ သူ့မိဘတွေအကြောင်းအာဒီသီကို မေးကြည့်လိုက်တယ်အာဒီသီက နင့်အမေကတော့ ဆုံးသွားပြီ အဖေတော့ ရှိသေးတယ်ဆိုတာနဲ့သူ့အဖေကိုတွေ့ချင်တယ်ဆိုပြီး အာဒီသီကို လိုက်ပို့ခိုင်းပါတယ်
သူတို့သွားနေရင်း သူ့အဖေအိမ်ရောက်ဖို့ မိုင် ၃၀၀လောက်မောင်းရဦးမယ့်နေရာမှာ ကားပျက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန် အာဂျွန်ဆိုတဲ့ အသက်ခပ်ကြီးကြီး လူတစ်ယောက်ရောက်လာပြီး အချိန်ကလည်း မရှိတော့ဘူးသွားရမှာလည်း ဝေးသေးတယ်ဆိုတော့ သူ့အိမ်မှာလိုက်တည်းဖို့ ခေါ်ရာကနေ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ စပါတော့တယ်
အာဂျွန်က အစပိုင်းမှာ အိမ်ရှင်ကောင်းပီသသလိုနဲ့ သူ့သားရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ တစ်မျိုးဖြစ်သွားပါတယ်သူ့သားဖြစ်သူက ရစ်ရှီရဲ့ ချစ်သူအာဒီသီကို မုဒိန်းကျင့်ဖို့ကြိုးစားသလိုသူကလည်း အိမ်ထဲကပြန်ထွက်ခွင့်မပေးတော့ဘဲ နှိပ်စက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ဇာတ်လမ်းက မထင်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေကို ပြောင်းလဲသွားတာပါ
အာဂျွန်တို့သားအဖက ရစ်ရှီကို ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ?????ရစ်ရှီမမှတ်မိတော့တဲ့ သူ့ရဲ့အတိတ်မှာ ဒီလူတွေနဲ့ ဘယ်လိုအရှုပ်အရှင်းတွေများရှိခဲ့လို့လဲ?????ဒါမှမဟုတ် စိတ္တဇလူသတ်သမားတွေပဲလားဆိုတာကို ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဆက်လက်ရှုစားပေးကြပါ